Santorini Surfer Loft e Uluwatu | I-Digital Nomads
Igumbi lakho lokulala e i-loft sinombuki zindwendwe onguTendi & Bukit Vista
Le loft inomtsalane kufutshane nolwandle iyakusa ngoko nangoko kwiSantorini vibes. Le propathi yafumana i-minimalist kodwa igqitywe rhabaxa ngenjongo. Gcoba nje isandla sakho phezu kodonga & voila uya kuzifumana umfanekiso ocacileyo malunga nendlela izakhiwo zaseSantorini ezivakalelwa ngayo.
Kule loft uya kufumana:
- Ibhedi e-Queen e-1 + ibhedi enye yesofa
- Igumbi lokulala kumgangatho wesibini
- Igumbi lokuhlambela labucala
-I-pantry yakho kumgangatho wokuqala (ukwenza ikofu yakho yasekuseni kwaye ugcine ukutya kwakho)
Ngokwenene, sinayo indawo yokutyela ekwindawo yokutyela.
Le ndawo isenokungabi yindawo elungele abantwana, kuba izitepsi eziya kwigumbi lakho lokulala zincinci kakhulu.
Le ndawo ikwanendawo yayo yokutyela apho unokuthatha ibhiya ebandayo kwaye uphole, okanye utye. Kukwakho nedama phambi kwalo, apho unokuqubha khona emva kwemini eshushu ejonge ukutshona kwelanga kunye nembonakalo entle yehlathi. I-Pantry iyafumaneka, kodwa akukho sitovu.
Ulwandle lwasePadang Padang luhambo lwemizuzu eli-10. Kwaye zininzi iivenkile zokusefa ecaleni kwendlela, kuba le loft inomtsalane ikwindlela enkulu (Jalan Labuan Sait). Ngoko ke yindawo ephezulu ehambelana ne-surfer. Ukuba ufuna ukuya edolophini, kumalunga nemizuzu engama-20 ukuqhuba.
Indawo yokuhlala iya kuba yinxalenye yeloft kunye nezinye iindwendwe. Ngaba ulungile ngaloo nto okanye mhlawumbi ufuna indawo yokuhlala yabucala? Nceda usazise :)
4.51 out of 5 stars from 121 reviews
4.51 · Izimvo eziyi-121
Le ndawo iphezulu yokusefa ikwindlela enkulu yaseJalan Labuan Sait. Apho kukho iqela leevenkile zokusefa ecaleni kwendlela. Ulwandle lwasePadang Padang luhamba imizuzu eli-10. Ngeli xesha ulwandle lwaseBingin luyimizuzu eli-10 yokuqhuba ngesikuta. Ke lungisa iibhulukhwe zakho ezimfutshane, iibhikini, kunye neeflops, kwaye ujonge ezo lwandle!
Ukuba ujonge into yokutya, ungakhathazeki, kuba zininzi iindlela ongakhetha kuzo ecaleni kweJalan Labuan Sait. Kwaye bonke bayakwazi ukuhamba! Kukho iBukit Cafe efuna kuphela imizuzu emi-2 ukuhamba. Ungalibali ukubuza umamkeli wethu ngesitshixo esikhethekileyo, ukufumana isaphulelo kwiBukit Cafe.
Ukuba unqwenela i-smoothie esempilweni nenencasa, ungaya nje kwiNalu Bowls edumileyo ngaphesheya kwesitalato!
Ukuba ulapha kwiholide kwaye ufuna indawo yokusebenza, iMaccalan social house/ indawo yokusebenzela ikufuphi nomnyango. I-ATM kunye ne-Minimarket nazo ziyakwazi ukuhamba. Bathatha kuphela imizuzu emi-5 ukuhamba ukusuka kwi-loft yakho. Kwaye ukuba ufuna ukubona uMdaniso we-Kecak Fire kwiTempile yase-Uluwatu kuthatha kuphela malunga nemizuzu emi-5 ukuya kwe-8 kwi-scooter drive.
Umbuki zindwendwe ngu- Tendi & Bukit Vista
Siyakuthanda ukudibana nondwendwe ngalunye kwaye siqinisekise ukuba unendawo yokuhlala emnandi apha. Sinabasebenzi abafumanekayo nangaliphi na ixesha.Banokuthetha isingesi esilinganiselweyo, kodwa mna kunye neqela leBukit Vista siya kufumaneka ngomyalezo okhawulezileyo ngalo lonke ixesha.
Siyakuthanda ukudibana nondwendwe ngalunye kwaye siqinisekise ukuba unendawo yokuhlala emnandi apha. Sinabasebenzi abafumanekayo nangaliphi na ixesha.Banokuthetha isingesi esilinga…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kuta Selatan